Iindaba -Uyibuyisela njani ngokukhawuleza ingxowa yothuli yomqokeleli wothuli?
Ngokubanzi, ibhegi yothuli yokususa uthuli inxitywa ngokuthe ngcembe, kwaye esona sizathu sokudinwa kwengxowa yothuli ngamandla okusila othuli. Ukongeza, kukho izizathu zokuwohloka kwezinto zokucoca ulwelo kunye nokubola kwezinto zekhemikhali ezibangelwa bubushushu obuphezulu.
Xa amandla okusila othuli omelele kakhulu okanye uthuli luqokelelana ukuya kuthi ga kwinqanaba elithile, emazantsi engxowa yothuli iya kunxiba kakhulu. Ukongeza, ukwanda kwesantya sokucoca kuya kukhokelela ekunxibeni kwengxowa yothuli. Xa ibhegi yonakele, ibhegi eyonakeleyo kufuneka itshintshwe ngokukhawuleza ukunqanda ukukhuhla okukhawulezayo komqokeleli wothuli. Nangona kunjalo, ukuba kukho umngxunya omncinci kuphela kwingxowa yothuli, ungasebenzisa ingxowa endala yothuli endaweni yokuyitshintsha ngokupheleleyo. Nangona kunjalo, ukuba ibhegi yothuli yonakele kwindawo enkulu, kufuneka itshintshwe ngokupheleleyo. Xa ususa ibhegi yothuli isusa uthuli, qala uyeke ukusebenza kwezixhobo zokususa uthuli, emva koko uvale isilawuli sothuli kwaye udibanise ingxowa yothuli. Xa ukhupha ibhegi yothuli, khupha ibhegi kuqala, emva koko tywina isangqa sentwasahlobo emlonyeni wengxowa yothuli uyimise kakuhle, kwaye ukhuphe ingxowa yothuli eyonakeleyo uye phezulu.
Phambi kokufaka ibhegi yothuli entsha, kufuneka ucoce uthuli oluwela kumngxunya weplate yentyatyambo, emva koko ufake ibhegi entsha. Ukufakwa kwengxowa yothuli kunokuthiwa lelona candelo lilumkileyo nelinomonde kuzo zonke amakhonkco. Xa ubeka ingxowa yothuli, qiniseka ukuba ungangqubeki okanye ukrwele ingxowa yothuli kunye nezinto ezibukhali. Nokuba ukukrwela okuncinci kuya kunciphisa ubomi benkonzo yengxowa. Ke ngoko, xa ufaka ibhegi yokuhombisa, faka ibhegi yokwahlukanisa ngaphakathi kwigumbi lengxowa yokuhombisa ukusuka kwindawo yomngxunya wentyatyambo yebhokisi kuqala, emva koko cofa umsesane wasentwasahlobo xa kuvulwa ingxowa yokuhombisa ibe yimilo ye-concave, kwaye uyibeke ngononophelo ipleyiti yeentyatyambo yebhokisi. Emva koko yenza iringi yasentwasahlobo ibuyele kwimeko yayo yantlandlolo, ukuze icinezelwe ngokuqinileyo kwisangqa somngxunya weentyatyambo, kwaye ekugqibeleni ubambe ngobunono ikheyi yebhegi ukusuka ekuvuleni kwengxowa yelaphu lokususa uthuli kude kube kukhuselo olukhuselayo kwinxalenye ephezulu yekheyiji yengxowa icinezelwe nje kumngxunya weplate yentyatyambo kumzimba webhokisi.
Ukuqinisekisa ukhuseleko, kufuneka kufakwe ingxowa enye yokhula ngaphambi kokufaka elandelayo. Oku kungasentla yindlela yokutshintsha ngokukhawuleza ingxowa yothuli yokususa uthuli. Ndiyathemba ukuba inokukunceda!
Ixesha Post: Feb-23-2020
Fume Isitshisi, Ifeni yecandelo leCentrifugal, Uxinzelelo oluphezulu lweCentrifugal Fan, Inlet engatshatanga yeCentrifugal Fan, Umjelo weRadial Blade Centrifugal Fan, Ukukhupha iFan,